Ambinaninony, distrikan’i Brickaville : eo amin’ny dingana fikarohana ny DNI Metals | NewsMada
Ambinaninony, distrikan’i Brickaville : eo amin’ny dingana fikarohana ny DNI Metals
Mbola ao anatin’ny dingana fikarohana grafita, amin’izao fotoana izao, ny orinasa kanadianina DNI Metals, ao amin’ny fokontany Ambatolampy, kaominina Ambinaninony, distrikan’i Brickaville. Hifarana izany fikarohana izany ato anatin’ny roa volana, koa miankina amin’ny valin’ny fanadihadiana ny handraisana fanapahan-kevitra hanohizana na tsia ny asa fitrandrahana. « Manana fahazoan-dalana ara-dalàna momba ny fikarohana sy fikajiana ny tontolo iainana ity orinasa ity. Ny aorian’izay, raha voaporofo ny fikarohana natao vao mangataka fahazoan-dalana hiditra amin’ny fitrandrahana”, hoy ny talem-paritry ny harena an-kibon’ny tany any Atsinanana, Amable Benjamin.
10 eo ho eo ireo lavaka fanaovana fikarohana hatramin’izao. 20 m ny halaliny raha be indrindra, santimetra vitsivitsy ny savaivony, ary mielanelana 1 km ny lavaka roa. Mety maharitra hatramin’ny 15 andro, raha ela indrindra, ny fikarohana atao amin’ny lavaka iray. Misy vita roa andro, miankina amin’ny toetry ny vato saprolite, araka ny fanazavan’ny teknisianina iray, Steven Goertz.
Nomena onitra ny tompon-tany
Efa nomena onitra ny tompon-tany voakasiky ny fikarohana, 300.000 Ar hatramin’ny roa tapitrisa Ar. Miankina amin’ny velaran-tany voakasika ny onitra nomena, izay natrehin’ny raiamandreny ao an-tanàna na ny tangalamena, araka ny fanamarihan’ny ben’ny Tanànan’ Ambinaninony, Ranaivo Cécilien. Tsy misy ny olana, noho izany, eo amin’ny mponina sy ny orinasa DNI Metals. Ny toe-javatra tahaka izao, matetika, avadika any amin’ny politika ka hararaotin’ny mpanohitra hifandonana amin’ny mpitondra. Ny harena an-kibon’ny tany aloha, tsy maintsy miantomboka amin’ny fikarohana, ary izay dingana voalohany izay, tsy maintsy misy fandavahana fa tsy fitrandrahana avy hatrany.
Mandeha ny asa sosialy
Na mbola amin’izay fikarohana izay aza ny orinasa, mandeha ny asa sosialy tohanany. Anisan’izany ny fanamboaran-dalana mampitohy ny fokontany Vohitsara sy Ambatolampy, mirefy 4 km, mifandray mivantana amin’ny RN2. Ny mponina any an-toerana ihany no nanao izany lalana izany amin’ny alalan’ny asa tanan-maro, 8.000 Ar isan’andro isan’olona, raha 3.000 Ar ny faheno amin’ny karazan’asa toy izany. Noho ny fahavitan’io lalana io, tsy sahirana amin’ny famoaham-bokatra intsony ireo tantsaha. Nizara fitaovam-pianarana ho an’ny ankizy 500 koa ny orinasa, ao Ambatolampy sy Vohitsara, natao ny 27 septambra teo, miampy ireo asa sosialy samihafa ao an-tanàna.